Jaljala Online – Page 68 – Jaljala Online
Author: Jaljala Online
प्रदेश ५ : चियाघरमा देखियो यस्तो अचम्म, कसले गर्ने नियमन, अब के हुन्छ ?
बैशाख ३१, बुटवल । मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा जानु सेवा प्रवाह सजिलो बनाउनु हो। तर बुटवल मालपोतका गतिविधि देख्दा त्यसको उल्टो लाग्छ। यो खबर लक्ष्मण पोखरेल/केशर राेकाले आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । अनलाइनकै नाममा सर्वसाधारणले एक सातासम्म मालपोत धाउनुपर्ने बाध्यता त छँदै छ, कर्मचारीलाई घूस लिनसमेत सजिलो भएको छ। ‘पाँच हजार तिरेपछि फास्ट ट्र्याकमा […]
Posted on May 14, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
रिना बस्नेत मृत्यु प्रकरण: यस्तो आयो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब के हुन्छ ?
बैशाख ३१, विराटनगर । २९ वर्षीया रिना बस्नेत मृत्यु प्रकरणको अन्तिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमबार प्राप्त भएको छ। यो खबर किशोर बुढाथोकीले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । फरेन्सिक (विधि विज्ञान) ल्याब रिपोर्टसँगै प्राप्त भएको पोस्टमार्टमको अन्तिम प्रतिवेदनले उनको हत्या नभएको पुष्टि गरेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठले बताए। शवको पोस्टमार्टम बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान […]
Posted on May 13, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
नवलपरासीमा भयो बबाल, जनप्रतिनिधिमाथि ढुंगामुडा, वडाअध्यक्ष घाइते
बैशाख ३०, नवलपरासी । अस्पताल निर्माणको विषयलाई लिएर सुनवल नगरपालिका ७ र ८ का स्थानीयले जनप्रतिनिधिमाथि ढुंगामुडा प्रहार गरेका छन्। यो खबर हरि शर्माले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । त्यस क्रममा प्रहरीको गाडी र एक वडाअध्यक्षको गाडीमा क्षति पुगेको छ। ढुंगा प्रहारबाट वडा- १३ का अध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्ण देवकोटा घाइते भएका छन्। नगरपालिकाको […]
यस्तो छ तीन दिनको मौसम पूवार्नुमान, कहाँ के हुन्छ ?
वैशाख ३०, काठमाडौं । भुमध्यसागरबाट आएको न्यूनचापीय प्रणालीले देशभरिको मौसममा बदली भएको छ। बादल र वर्षाले काठमाडौं उपत्यकामा आइतबारको तुलनामा सोमबार झन्डै २ डिग्री तापक्रम घटेको छ। आइतबार काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम १४.८ डिग्री थियो भने सोमबार उक्त तापक्रम १३ डिग्री मापन भएको छ। आइतबारको उच्चतम तापक्रम ३२.२ डिग्री पुगेको थियो आज त्यो पनि घट्नेछ। […]
Posted on May 13, 2019 May 13, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
मलेसिया रोजगारीमा देखियो यस्तो चमत्कार, अब के होला ?
बैशाख २९, काठमाडौं । नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायीलाई व्यक्तिगत रूपमा पठाएको पत्रले गत कात्तिकमा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । यो खबर ईश्वर अर्यालले लोकान्तरमा लेहेका छन् । मलेसियाले नै पठाएको मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा १ सय २६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले […]
डा. मिमी गिरी मलाई त थाइराइड भएछ… मलाई थाइराइड लाग्यो… आजभोलि आमरुपमा सुनिने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरुमध्येको एक प्रमुख समस्या ‘थाइराइड’ भएको छ । धेरैलाई भ्रम छ थाइराइड भनेको रोग हो । वास्तवमा, थाइराइड आफैंमा रोग होइन । यो त मानिसको शरीरमा हुने एउटा विशिष्ट र महत्वपूर्ण अंगको नाम हो । त्यो अङ्गले राम्ररी काम गर्न सकेन […]
Posted on May 12, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
डा.नुतन शर्मा प्रसूती तथा स्त्री रोग एवम् टेष्ट ट्यूव बेबी विशेषज्ञ महिनावारी हुने बेलामा धेरै पेट दुख्ने गर्छ। महिनावारीबारे आवश्यक ज्ञान नहुँदा किशोरीले असजिलो महशुस गर्नुका साथै अप्ठ्यारो अवस्थाको समेत सामना गर्नुपरेको हुन्छ। प्रायःकिशोरीहरूमा १३–१४ वर्षदेखि १७–१८ वर्षसम्मको समयमा महिनावारी नियमित हुने गरेको पाइँदैन। महिनावारीको समयमा कहिले– कसैलाई धेरै रक्तस्राव भइरहेको हुन्छ भने कसैलाई कम […]
Posted on May 11, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
प्रदेश ५: पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण, बुटवलवासीको चमत्कार, अब के हुन्छ ?
वैशाख २८, बुटवल । बुटवलका बासिन्दाको अवरोधले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। यो खबर भगवती पाण्डेले सेतोपाटीमा लेखेकि छन् । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तीव्र गतिको रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरू गरिएको रेलमार्ग निर्माणमा सबभन्दा बढी अवरोध बुटवलमा भइरहेको छ। रेलमार्गका लागि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट (डिपिआर) तयार भइ अन्य क्षेत्रमा धमाधम […]